Yekupedzisira Yekufungidzira VII ikozvino yavapo paApp Store | IPhone nhau
Yekupedzisira Yekufungidzira VII ikozvino yavapo paApp Store
Muna Gumiguru 2013, Square Enix Vati kuvhurwa kwemitambo yemhando iyi kunogona kutora makore nekuda kwemiganhu yekuchengetedza. Zvino, anenge makore maviri gare gare, Yekupedzisira Kufungidzira VII, iyo ngano yeJapan RPG mutambo wakabuda mu1997 kune yekutanga PlayStation, inosvika iyo App Store saka tinogona kutamba imwe yeanonyanya kukurudzira RPGs enguva dzese kwese. Dambudziko raitaurwa nemukuru weE Square Enix nderekuti, kusvika nguva pfupi yadarika, Apple yaingobvumidza zvikumbiro zve2GB kuti zviiswe, asi muganho uyu wakangowedzerwa kusvika ku4GB, zvinova zvinokwana kukwanisa kuisa nekumhanyisa Final Fantasy VII chero kupi. Chishandiso cheIOS icho zvine musoro chine nzvimbo yemahara.
Iyo vhezheni yeFinal Fantasy inouya kuIOS haisi vhezheni yepakutanga PlayStation mutambo, asi iyo PC vhezheni, iyo, zvakare, iri vhezheni yepakutanga ine graphical kugadzirisa. Idzi gadziridzo dzinokosheswa, kubvira makore gumi nemasere apfuura, iwo magiraidhi akasiya zvakawanda zvingadiwa mune iyo 18D simulation ye2D. Zvisinei, iyo mobile vhezheni haina kudaro yakakura maererano nemifananidzo.
Kudzora hunhu hwedu tichava nesarudzo mbiri: shandisa iyo chaiyo analogu kana a chaiyo mutambo wepadhi. Mune mawonero angu, analog iri nani zviri nani sezvo iine margin akawanda ekukanganisa uye isu takajaira asi ivo vakawedzera iyo mutambo wepadhi kufukidza zvese zvingangodaro.
Yekupedzisira Yekufungidzira VII yeIOS inosvika ne mukana wekushandisa manomano, zviri nani kuzivikanwa se «cheat«, Izvo zvinotibvumidza isu kuti tisvike kune yakanyanya ruzivo kana kubvisa mamwe makara muhondo. Ini ndinotenda kuti mumitambo iwe haufanire kushandisa urwu rudzi rwemanomano. Mutambo unofanirwa kutambwa sezvauri uye kushandisa hunyengeri isu hatisi kuunakidzwa mukubwinya kwawo kwese. Zvakare, kana tikabhadhara zvakaringana (€ 15,99) uye kubiridzira, tinopedzisa mutambo kwamberi uye hatisi kuzozviita.
Nhasi, RPGs zvachinja zvishoma, asi Yekupedzisira Yekufungidzira VII yaive shanduko mune aya marudzi emitambo. Pamwe hazvisi zvekuda kwevechidiki vazhinji, asi zvirokwazvo nhau dzekuuya kwemutambo paIOS dzinonyanya kufadza avo vairidza paPSX.
Final Fantasy VII mutambo unoda iOS 8.0 kana kuti gare gare, unoenderana ne iPhone, iPad uye iPod touch uye yakagadziridzwa kune iPhone 5. Square Enix inokurudzira kuti inobata nezve 2GB, asi iwe uchafanirwa kunge uine 4GB yemahara kuti utore .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Yekupedzisira Yekufungidzira VII ikozvino yavapo paApp Store
zvinotyisa .. one shit ... kana uine iphone 5, 6 kana 6 plus unoona mitsetse miviri yebhuruu inobvisa hafu yechidzitiro ine bhagi iyo inoita kuti mutambo ufambe zvakanyanya kureva kuti unofamba nezvose inoenda kukurumidza kamera Iwo magwaro noda nguva yekuaverenga kunyangwe ukadzikisa kumhanya kudzikisa mitambo haina kuponeswa kunyangwe iyo sicronices ine icloud uye kana ukabuda muapp mutambo wacho uchitanga zvekare kureva kuti, haushande mu multirarea uye ruzha runovhara, isu tichava nenjodzi. inodzora maeuro gumi nematanhatu andakatobvunza kare-enix neapuro kuti rindidzore nekuisa chichemo chekusashanda kwemutambo-weapp kana pane izvi vakawana mari zvirinani kusaita kudaro vanhu vasingazombotamba mitambo iyi Vanozoona zvakashata nezvazvo uye vanozosemeswa nemitambo, zvinonyadzisa ndinovimba vachandidzosera mari yangu dai ndisina kupinda nematare edzimhosva izvozvi. uye chinhu chakaipisisa ndechekuti vanhu vanovhota vakanaka nekuti mutambo wacho hauna kuongorora mashandiro uye lime ity yacho tichaenda kunovhota 2 nyeredzi dzezita uye kwete zvehunhu hweiyo vhezheni vhezheni yefoni damn vasingazive
Carls uri kutaura chokwadi, kunyangwe ndisina kuyedza mitsetse iri iphone 6 plus nekuti ndiri kuitamba ipad. Kuti ndikuudze kuti ini handina kubhadhara kana kobiri ndatenda ku "Jailbreak", ndinoiridza pa ipad 3 ine ps4 controller, kuti kana isina controller haina kushata futi, iyo yekumhanyisa bug ndakatoona panguva iyo yandakatanga mutambo uye ndikadzika chitima haha ​​asi ini handizive kuti idiki diki iro rinofanira kugadziriswa, icloud haina zano nekuti ini handina kuiisa pane iphone. Iye zvino ndinozviisa iwe mushangu dzako uye ndinofunga zvakafanana newe, € 16 yakakanda chokwadi. Ini ndinopa maonero angu semushandisi wejeri.
Isu tatova nekuziviswa kwemukwikwidzi weApple Watch: iyo nyowani Gear 2
Mashandisiro anoita iPad Multitasking muIOS 9